''I-Birch Lane'' I-B&B equkethwe wena ngokwakho, i-Cradoc/Cygnet - I-Airbnb
''I-Birch Lane'' I-B&B equkethwe wena ngokwakho, i-Cradoc/Cygnet
Cradoc, Tasmania, i-Australia
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Michelle
“I-Birch Lane” iyifulethi le-B&B eliziqukathe ngokuphelele enhliziyweni ye-Huon Valley, phakathi kwe-Cygnet ne-Huonville. Ikhishi eliwubukhazikhazi lokuziphekela, ibhulakufesi elinikeziwe, igceke langasese, indawo yokupaka ehlanganisiwe, i-WIFI yamahhala engenamkhawulo, eduze kwezitolo nezindawo eziheha izivakashi. Ifulethi lixhumeke kancane kodwa liyimfihlo futhi liyakhiywa.
''I-Birch Lane'' ilala izihambeli ezingafika kwezi-5 enhlanganisweni yokulala ;QS, Dbl Murphy Bed, 2x Single foldways.
Izivakashi ezengeziwe ngu-$10 p ubusuku ngabunye. Portacot iyatholakala.
Imizuzu eyi-7 ukuya ezitolo nezinto ezilula ezihlanganisa iWoolworth, amahhovisi eposi, odokotela, amabhange amakhulu, izimakethe zabalimi, amathilomu nezindawo zokudlela - enyakatho noma eningizimu ukusuka eCradoc ukuya eCygnet noma eHuonville.
Eduze kakhulu neFat Pig Farm. (10 amaminithi)
Imizuzu engama-40 ukusuka edolobheni laseHobart - imakethe yeSalamanca, ukuyothenga kwedolobha kanye nokudla, i-MONA, iminyuziyamu nemikhosi, Taste of Tasmania.
Imizuzu engama-60 (ngosuku oluhle) ukusuka eHobart International Airport.
Ihora eli-1 15 ukuya eRichmond Historic Village.
Amahora angu-2 (cishe) ukusuka e-Port Arthur Historical Site.
Ihora elingu-1 namahora angu-15 (cishe) amahora ukuya e-Tahune Airwalk.
Ukuhlala ubusuku obubodwa? Ayikho inkinga. Sincamela ukuhlala okungenani ubusuku obu-2 kodwa ubusuku obubodwa buzoheha imali yokuhlanza engu-$40.
Ukuhamba Nezingane? Kunomhlaba omningi wezingane ezigadiwe zokudlala ikhilikithi, i-totem tennis noma ukudlala nenja yethu. Kukhona nezincwadi namaphazili ekhabetheni.
Ukuhamba nge-RV noma isikebhe? Sinendawo eningi yokupaka.
Ukuxolelwa: Le ndlu ingaphansi Kwesigaba 12 Somthetho ka-1993 Sokuhlela Nokugunyazwa Kokusetshenziswa Komhlaba
''I-Birch Lane'' ilala izihambeli ez…
4.98 (izibuyekezo ezingu-96)
Sinomakhelwane abahle abathule, buqamama, njengoba sise-acreage, egqumeni, enokubukwa okumangalisayo.
Sihlala futhi sisebenza endaweni (umyeni wami ungumakhi, mina ngingusonhlalakahle) kodwa indawo yakho yokulala yaseB&B ihlukene ngokuphelele futhi iyakhiywa. Lokhu kusho ukuthi silapha uma usidinga, kodwa asibonakali uma ungasidingi. Sinenja endala, enobungani ngokweqile, namakati angu-2.
Sihlala futhi sisebenza endaweni (umyeni wami ungumakhi, mina ngingusonhlalakahle) kodwa indawo yakho yokulala yaseB&B ihlukene ngokuphelele futhi iyakhiywa. Lokhu kusho ukuthi sil…
Hlola ezinye izinketho ezise- Cradoc namaphethelo